सानो आन्द्राबाट भएको रक्तश्राव रोक्न दुई साताको अन्तरमा दुई पटक भारतको हरियाणास्थित मेदान्त अस्पताल लगिएका कविवर अहिले उपचारपछिको थकान र कमजोरीमाझ आराम गरिरहेका छन् । यो साता कवि माधवप्रसाद घिमिरे लैनचौरस्थित आफ्नै निवासमा आफू वरपर कुनै भीड र कोलाहल नराखी बसिरहेका भेटिए ।
भारतीय सिनेमालाई विश्वकै ठूलो चलचित्र उद्योगका रूपमा लिइन्छ । तर, भारतीय समाजका सबैभन्दा पछाडि पारिएका समुदायका सरेकार ती फिल्महरूले खासै उठाउन सकेका छैनन् । अझ भारतीय भूमिमा नै विकसित भएको क्रूरता जात व्यवस्थाबारे भारतीय मूलधारका फिल्म खासै बन्ने गरेका छैनन् ।
राज्यव्यवस्था हिन्दु धर्म र दलित
दिनेश कण्ठ अहिले पोखरा, लुम्बिनी, चितवन र नगरकोट लगायतका चिनियाँ पर्यटकका लागि लोकप्रिय ठाउँमा होटल खोल्ने प्रयास गर्दै छन् । उनको अनुभवमा नेपालमा महँगा चिनियाँ पर्यटक गएकै छैनन् । मध्यम वर्गका केही र निम्न वर्गका चिनियाँ पर्यटक मात्र नेपाल जान्छन् ।
व्यक्ति एक जीवन अनेक
यस पटक निर्देशक राजकुमार हिरानी मिडियामाथि खनिएका छन्, तर्कसहित । त्यसो त कलाकार, फिल्मकर्मीलाई सेलिब्रिटी बनाउने काम पनि मिडियाकै हो । तर, हिरानी मिडियालाई अहिलेको खोजी पत्रकारितामा भन्दा चटपटे बिकाउ समाचार उन्मुख फस्टाउँदो व्यवसाय भनी टिप्पणी गरेका छन् ।
जोगी हुनु त काले राईजस्तो । राईको छोरो उमेरले ३० वर्ष पुगेपछि मात्रै अक्षरको महत्त्व बुझे । त्यसपछि जोगीका साथ लागेर इन्डिया भासिए । अक्षरयात्रा आरम्भ गरे । त्यो पनि संस्कृत भाषा र शिक्षा । गन्तव्य सही ठाउँमा परेछ । जति हिस्सा निरक्षर बाँचे, उत्ति नै हिस्सा संस्कृतज्ञानको महासागरमा चुर्लुम्मै डुबे । वेदान्ताचार्य बने । अनि नेपाली समाजमा फुत्तै निस्किए, डा. स्वामी प्रपन्नाचार्य भएर । उनले जीवनदर्शनको प्रतिपादन गरे । भन्न थाले— ‘जीवन परिश्रमपूर्ण, धैर्यवान र साहसपूर्ण सर्वजनहिताय, सर्वजनसुखायका लागि होस् । सफल होइन असल हुनुपर्छ ।’
नेपाली भाषामा लेखिएका ललितकला विषयसम्बन्धी पाठ्यसामग्रीहरूको सर्वथा अभावलाई दृष्टिगत गर्दै सिर्जना कलेज अफ फाइन आर्टस्ले ‘चित्रकला’ शीर्षकको अत्यन्तै उपयोगी पुस्तक प्रकाशन गरेको छ । यस पुस्तकमा चित्रकलाका तत्त्वहरू, कलाका आधारभूत नियमहरू तथा यस विधामा प्रयोग हुने सामग्री तथा माध्यमहरूबारे जानकारीहरू चित्रसहित समेटिएका छन् । यस अतिरिक्त सुप्रसिद्ध स्वदेशी तथा विदेशी चित्रकारहरूसँग सम्बन्धित विविध जानकारीहरू पनि यसमा समाविष्ट छन् ।
नेपालमा चिया खेतीको इतिहास करिब डेढ सय वर्ष मानिन्छ । यो चिया उद्यमका आ–आफ्नै पीडा छन् । न्यूनतम ज्याला नपाएको पीडा श्रमिकसँग छ भने उद्यमीलाई अनावश्यक सेवा सुविधा दिनुपर्दाको समस्या पनि छँदैछ ।
चीनको आकाशे रेल
घनश्याम खड्का, राजेन्द्र मानन्धर
एकतमासले गाडी कुदिरहेको थियो, सयको गतीमा । तर, भित्र बस्दाको अनुभवचाहिँ बडो स्थिर थियो, कहीँ केही नहिल्लएजस्तो । कतिसम्म भने टेबलमाथि राखिएको पानीको बोतलसमेत पनि टसको मस भएको थिएन । नेपालका सडकमा बिस्तारै हाँक्दा पनि पुट्ठो थच्चारिएको अनुभवको पृष्ठभूमिमा चीनका फराकिला र चिल्ला सडकमा गुड्दाको अनुभूतिले सहयात्रीहरू रोमाञ्चित थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बेलाबेला जनतालाई देखाउने पानीजहाजको सपनालाई लिएर धेरैले हाँसोको विषय बनाउने गरेका छन् । नेपाल गरिब हुनुको एउटा मुख्य कारण ‘भूपरिवेष्ठित भएर हो’ भन्ने सानैदेखि पढ्दै आएकी थिएँ । तर, जेनेभामा भेटिएका धेरै साथीहरू समुद्रसँग टाँसिएका देशका, समुद्री जीवन शैलीमा हुर्केका र समुद्रले जोडेका दु:खसँग जोडिएका थिए ।
डा. निमा नामग्याल शेर्पा, एमबीबीएस, चीन ताइनजिन मेडिकल विश्वविद्यालयबाट सन् २००९ मा एमबीबीएस सकाएपछि निमाको परिचय यस्तै बन्यो । तर, ठमेलस्थित उनको कार्यकक्ष छिर्दा मेडिकलसम्बन्धी केही देखिंदैन । हिमाली चुचुरा । आइस–क्रु बोकेका मानिस । कम्मरमा डोरीले आपसमा बाँधेका व्यक्ति । हिमाललाई नेपथ्यमा राखेर चरिरहेका याक र चौंरीका बथान । हिमाल चढिरहेका मानिसको लर्को । यस्ता ठूल्ठूला तस्बिर भित्तैभरि छन् ।
मलाई थाहा छ,मेरी आमालेनवजात मेरो फोटोनाङ्गा स्वरुप श्यामश्वेतकोअझै सँगालेर राखेकी छन्आफ्नो मुटुको फ्रेमभित्र...।
अम्बरलाई किन सम्झने ?
अम्बर गुरुङका थुप्रै गीतसंगीत नोटेसनमा छन्, रेकर्डमा आएका छैनन् । यी सिर्जनालाई संरक्षण, कदर र स्थान दिन एउटा यस्तो अम्बर स्मृति घर बनोस् जहाँ अम्बर गुरुङको कला–सिर्जना बाँचिरहोस्, जहाँको सिर्जनशील ऊर्जाले आगामी पुस्ताका नेपाली सङ्गीत उपासकका लागि मार्गदर्शक गरोस् ।
यसपालि त मनै फाट्यो...
एउटा यस्तो गीत जसलाई संगीतकार अम्बर गुरुङले एकै निमेषमा संगीत भरेका थिए, गायिका अरुणा लामाले आफूले गाउनैपर्ने गीत भनेर जिद्दी गरिरहिन् । गीत रेकर्ड गर्दा अम्बरको सर्त थियो– अरुणा, यो गीत गाउँदा ता स्टुडियोमा रुन पाउँदिनस् । यदि रोइस् भने तैंले यो गीत गाउन पाउँदैनस् ।
संग्रौलाको हमजाएगा गफ
खगेन्द्र संग्रौलालाई ‘पारिजात स्मृति दिवस’ मा हङकङ साहित्य परिषद्ले निमन्त्रणा पठायो । हङकङ जाने भएपछि मन चंगा भयो रे । र, उनी पधारे हङकङ ।
बााटाघाटा त नभएका होइनन् । छोटा बाटा, गल्छी–गल्छ्यौंडा त काठमाडौं शहरको विशेषता नै हो । तर, अलिकति हतारमा भएको र सुटबुट लगाएको मानिस गल्लीमा फँस्न पनि सक्दछ । गल्लीको बाटो ढलीमली गर्दै, चिलाएको ढाड पर्खालका भित्तामा कन्याउँदै, साँढे आउने सम्भावना त छँदै थियो । साँढेबाट बच्न गल्लीमा भाग्ने ठाउँ थिएन ।